Fantaro ny antony mahatonga anao hahazo vatana mangatsiatsiaka sy fomba mahomby hamonosana azy - Fialam-boly
Home » Blog » Fantaro ny antony mahatonga anao hahazo vatana mangatsiatsiaka sy fomba mahomby hamongorana azy
Inona no tena antony mahatonga ny voan'ny kibo? Misy teoria marobe amin'izany. Ny olona sasany dia milaza fa ny génétique mahantra. Ny hafa milaza fa adin-tsaina izany. Ary maro ireo olona hafa no mihevitra fa vokatry ny metabolista miadana izany. Inona àry ny marina? Raha ny marina, saika ny vokatra azo avy amin'ny fihinanana sakafo tsy misy fihinanana sy ny fomba fiainana tsy mavitrika.
* Inona no drafitra fihariana mahomby indrindra amin'ny fahavoazana amin'ny fahavoazana?
Ny sakafo dia miteraka sakafo be dia be. Ny fitsipika fototra tokony hotsaroana dia ny misoroka izay sakafo aroso. Tetik'ady mahery vaika nefa tsotra izany fa maro no navotsotra ny kibo. Ny fotoananao rehefa misakafo dia manan-danja ihany koa. Amin'ny ankapobeny, tadiavo fotsiny ny hialana amin'ny fihinanana mandritra ny fotoana tsy maharitra. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​mety ho tara amin'ny alina hariva alohan'ny hatory.
Noho ianao tsy mazoto miasa mba handoro ny kaloria, matetika dia iray amin'ny antony ilazana fa tsy mihinana alohan'ny hatory. Ny vatany avy eo dia mifarana amin'ny fitehirizana amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'ny sakafo mahavelona. Mihinàna voankazo sy veggies raha toa ianao ka mangetaheta mandritra ny fotoana tsy alehanao. Raha mitady fomba mora hanarahana ny drafitra ianao dia jereo ny Eat Stop Eat fandaharana izay tsara ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra. Programa malaza iray hafa ho an'ny fatiantoka mavesatra izay ho soso-kevitra fa ny 4 Diakra Herinandro nataon'i Brian Flatt.
Na mifidy iray amin'ireo drafitra izay efa nolazainay izahay na tsia, ny tsipika ambany momba ny fahavoazan'ny fahavoazana dia ny maha-zava-dehibe ny sakafo fiasanao toy ny fiasanao. Nahoana no miala amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny gym raha mihinana fotsiny ianao tahaka ny fako? Aza hadino ny manova ny fahazaran-dratsinao ary miezaha ho mavitrika kokoa. Izany no torohevitra lehibe indrindra azontsika omena anao.
* Inona no fomba fiasa mahomby indrindra?
Na eo aza ny zavatra henonao, dia tsy mandeha amin'ny rindrina mandritra ny ora maro izy io. Ny voka-dratsin'ny hazakazaka mavesatra dia voatsikera be loatra, ary mila mihazakazaka mandritra ny fotoana lava be ianao mba hahita vokatra manan-danja.
Ho an'ny lehilahy, fandaharana fampihetseham-po lehibe izay soso-kevitray fa ny Ny programan'ny Weight Weight Beast. Ny Body Weight Beast dia endrika mahafinaritra 30 andro izay mitaky ny fampiasana ny vatanao manokana. Jereo ny lahatsary eto ambany ho an'ny 10 amin'ny fampiasana vatomamy tsara indrindra.
Get Ripped & Chiseled amin'ny 30-Andro miaraka amin'ny Biby Weight Weight
Ho an'ireo vehivavy, programa fampihetseham-po lehibe 2 izay soso-kevitray dia ny bikini Body Workouts ary Flat Belly Fast. Bikini Body Workouts manome anao amin'ny lahatsary fanabeazana bikini amin'ny aterineto, fitarihana sakafo, mpitari-dalana amin'ny traikefa, 21 andro booty gitara fampiasana glute sy zavatra maro hafa.
Flat Belly Fast dia programa fampiofanana vaovao noforonin'ny mpampiofana manokana Danette May. Ny zavatra mahagaga momba izany Feno faniriana velona dia ny Danette May dia manolotra ny drafitra amin'ny DVD ho an'ny maimaim-poana dia tsy maintsy mandoa ny saram-pandefasana dia tena mendrika ny mijery izany. Ny Flat Belly Fast dia ahitana ihany koa ny karazana sakafo 10 andro miaraka amin'ny sakafo matsiro fofona matavy.
Na dia tsy misy fahazoana manao fanatanjahantena tsara aza, dia misy fomba maro azo tratrarina amin'ny asa. Ireo fandaharam-pandaharana mahomby ireo dia nanampy olona an'arivony maro handany fatim-bolana. Aorian'ny iray amin'ireo fomba fiasa mahazatra ireo dia hanampy anao hahita vokatra izay tianao haingana kokoa.
* Inona no fampiasana tsara indrindra?
Ny fiasan'ny vatana manontolo sy ny fampiofanana amin'ny fanabeazana ambony (HIIT) dia mahatalanjona. Manontany tena hoe inona ny HIIT? HIIT, na fampiofanana enti-manentana avo lenta, dia teknika fampiofanana izay ahafahanao manome, ny ezaky ny zato isan-jato, amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena haingana sy haingana, arahin'ny fotoana fohy, indraindray mavitrika, fanarenana. Ny fampiasana ny fiasan'ny body manontolo amin'ny fampiharana fototra izay mifantoka amin'ny vavoninao, dia hanampy amin'ny fampivoarana ny fivoaran'ny ra ao amin'ny faritra misy anao; izay miteraka fihenam-bolana haingana.
Ny zava-dehibe tokony hotsaroana momba ireo fomba fampiharana ireo dia ny ilainao hanatanterahana azy ireo alohan'ny hikatsahany. Maro no mihazona ny fahazarana manao ireny fampiasana ireny miaraka amin'ny endrika mahantra fotsiny mba hanaovana fibodoana bebe kokoa Ny endrika mahantra dia mitondra loza bebe kokoa noho ny tsara.
Rehefa tsy mety, dia mety hitarika olana amin'ny hoavy ny fanatanjahan-tena. Azonao antoka fa fantatrao tsara ny teknikam-pitsapana alohan'ny hitsambikina any amin'ny fomba fiasan'ny traikefa. Inona no fampiasana tsara indrindra? Misy karazana fampiharana goavana hisafidianana, eto dia tsara ny manomboka amin'ny:
Rehefa manao ny lalana mety izy dia ity no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanesorana ny tavy vantony. Ity ny zavatra tokony hataonao: alatsaho aloha ny baolina henjana, izay ahazoana antoka fa ambany sy ambany ny ambiny.
Ataovy azo antoka ny mandohalika ary aza avela hiala amin'ny tany ny tongotrao. Atsofohy eo an-dohanao ny tananao ary atsangano tahaka ny mahazatra anao ... ary miverina tsikelikely amin'ny toerana voalohany.
* Fa maninona no mampiasa baolina fanatanjahan-tena?
Ny fihodinan'ny fivoahana bebe kokoa no tsara kokoa satria ny baolina fanatanjahan-tena dia mahatonga ny abs ho flexy bebe kokoa. Izy io koa dia miasa hozatra kokoa noho ny trondro maina. Handoro kaloria bebe kokoa ianao ary hampivoatra midina midina mahery kokoa amin'ny baolina fanatanjahantena.
Farany, fa tsy ny kely indrindra, ny fanalahidin'ny fitantanana mahomby dia tsy miova. Ataovy azo antoka tsara ny manana drafitra voaporofo ary manaova fihetsika tsy miovaova sy tsy miovaova mba hahatratrarana ny valin'ny lozam-pifamoivoizana tianao. Satria maro ny olona tsy manana tanjona mazava loatra, ny ankamaroan'ny olona dia manomboka amin'ny fampiasana fototra ary mijanona herinandro maro ao anatin'izany izay tena mampalahelo.
Izany no mahatonga ny programa fampiharana toy ny 1 ora Belly Blast ary Danette May's FREE Flat Belly Fast DVD dia tena mahomby. Ireo drafitra ireo dia mandritra ny fotoana voafetra, ary fantatrao tsara izay tokony hataonao isan'andro. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia araho amin'ny fandaharam-potoana mba hahitana ny valin'ny fanirinao. Izany dia tsy fitoviana sy tsy fitoviana no ho namanao tsara indrindra raha ny fanatrarana ny vatana izay irinao. Ampahafantaro anay ny eritreritrao ato amin'ity lahatsoratra ity amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ary tsapao fa afaka mizara torohevitra hafa momba ny lozam-pifamoivoizana anananao ianao
March 3, 2018 Admin Blog Tsy asian-teny